स्वस्थ यौन जीवनको लागि अपनाउनुपर्ने उपाय - AAjakokhaber
के तपाईंको यौन जीवन दिक्दारिलो र तनावमा बितिरहेको छ ? त्यसो भएको छ भने पार्टनरको मुडको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टामा प्रेमको नयाँ आयाम भरेर यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि तल केही टिप्सहरु उल्लेख गरिएको छ ।
१. यौनको लागि आफैँ अग्रसर हुनुहोस्
तपाईंको पार्टनर दिनभरको थकाइका कारण आरामको मुडमा हुन सक्छन् । तर तपाईंको मुडले यौन सम्पर्कको खोजी गरिरहेको छ भने चुपचाप बस्नुको साटो उनीहरुको मुड बदल्ने प्रयास गर्नुहोस् । अचानक तपाईंको पार्टनरले तपाईंको मुड र सेक्सी शैली देखेर आफ्नो सबै थकान बिर्सने छ ।
२. आफूलाई राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुहोस्
छरिएको कपाल, पसिनाले भिजेको शरीर र थकित अनुहारका कारण पुरुषहरूको मूड अफ हुन्छ । विशेष गरी पसिनाको गन्धले रोमान्सको वातावरणलाई बिगार्छ । हुनसक्छ तपाईंको बेवास्ता गर्ने बानीले तपाईंको पार्टनरको मुड पनि अफ भइरहेको हुन सक्छ । त्यसैले आफ्नो पनि ख्याल राख्नुहोस् । सानो कुरालाई ध्यान दिएर जस्तै अनुहार धुनु र ओछ्यानमा जानुभन्दा पहिले लुगा परिवर्तन गर्नुहोस् । जसले तपाईंप्रति आकर्षण बढाउन सहयोग गर्छ ।
३. प्लेअपको विधि पूरा गर्नुहोस् ।
यो अक्सर देखिएको छ कि महिलाले यौन सम्पर्कपछि प्लेअपको अभाव महसुस गर्छन् । यौनपछि चुम्बन गर्नु भन्दा यौन सम्पर्क अघि नै पर्याप्त मात्रामा प्लेअपमा ध्यान दिनुपर्छ ।
४. उपहारको लागि दबाब नदिनुहोस्
रोमान्सको नाममा के तपाईं समय–समयमा आफ्नो पतिबाट चकलेट, पुतली वा टेडी जस्ता उपहारहरू माग गर्नुहुन्छ ? यदि त्यसो छ भने त्यो पनि गलत हुन सक्छ । तपाईंको उपहार बारम्बार सोध्ने बानीले तपाईंको पार्टनरलाई रिस उठाउन सक्छ ।
५. रोकतोक नगर्नुहोस्
तपाईंले सायद धेरै स्थानहरूमा पढ्नु भएको छ कि सेक्स बिस्तारै सुरू हुनै पर्छ । तपाईं उनीहरूको आँखा यस्तो प्रकारले हराउनुहुन्छ कि तपाईं आफूलाई बिस्तारै पग्लिरहेको महसुस गर्नुहुन्छ । त्यसैले आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमतीको मुड चलेको बेलामा उनीहरुलाई रोक्ने भन्दा पनि सहयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोस् ।
६. आवाजमा ध्यान दिनुपर्ने
धेरै महिलाहरु यौनको समयमा आवाज निकाल्छन्। वास्तवमा आवाजका कारण उनीहरु आफ्नो साथीसँग सन्तुष्ट रहेको देखाउन चाहन्छन् । तर, धेरै पुरुषहरूले यसलाई नजिकबाट बुझ्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंको पार्टनरले पनि आवाजको भाषा बुझ्दैन भने दुः खी नहुनुहोस् । उनीहरूको प्रकृति बुझ्नुहोस् र समर्थन गर्नुहोस् ।
Previous पहिलो पटक याैन सम्पर्क गर्दा यी हुन् ध्यान दिनुपर्ने ९ महत्वपूर्ण कुरा
Next पहिलो यौन सम्पर्कमा युवतीले चाहने कुराहरु
कसले पुरा गर्न सक्छ मेरो चाहना*